Tsy mazava ilay “fitokana-monina”: sahirantsaina ireo taksibrosy ho any Mahajanga | NewsMada
Tsy mazava ilay “fitokana-monina”: sahirantsaina ireo taksibrosy ho any Mahajanga
Tsy mbola mirindra araka ny tokony ho izy ny fitaterana ireo olona hody any amin’ny faritra niaviny avy, raha ny omaly, andro faharoa. Anisan’izany ny any Mahajanga, mampiasa saina ny mpamily ny fodiany.
Namoaka fanapahan-kevitra ny faritra Boeny, fa tsy maintsy hatoka-monina mandritra ny 14 andro avokoa ny mpandeha rehetra avy aty Antananarivo, tonga any Mahajanga. Niteraka fikoron­tanana ho an’ireo mpamily izany satria toa tsy noheverina ny mom­- ba azy ireo. Tsy mazava amin’izy ireo ny fepetra raisina aminy rehefa tonga any Mahajanga raha voakasik’ity fitokana-monina ity na tsia. Raha ny tokony ho izy, miverina avy hatrany, miakatra aty Antananarivo indray ireo taksiborosy raha vao tafidina ny mpandeha, ary mety tsy hitondra olona akory aza. Amin’ireo mpamily, tsy ampy ny fandrindrana sy ny fandaminan’ny tompon’ andraiki-panjakana isan-tsokajiny, mahatonga izao fikorontanana izao.
Tsy maharaka ny isan’ny fiara
Nikorontana koa ny teny amin’ny toby Anosizato, ho an’ny zotra manaraka ny RN1, mandeha Imerintsiatosika, Arivonimamo, Manalalondo, sns, satria tsy maharaka ny hamaroan’ny mpandeha ny isan’ny fiara mpitatitra. Nilamina kosa ny eny Antohomadinika ho an’ny zotra mankany Alaotra.
Tsiahivina fa efa tsy nilamina koa ny fandaminana ny fakana ilay fahazoan-dalana handeha amin’ny taksibrosy. Voalaza fa tsy maintsy maka fanomezan-dalana eny amin’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT), nanomboka ny alatsinainy 6 avrily teo. Natsahatra indray anefa izany, ny omaly talata satria maro loatra ireo olona tonga teny Andohatapenaka. Miteraka savorovoro ho an’ny vahoaka izany, sy indrindra ho an’ireo tompon’andraikitra mpanatanteraka baiko eny ifotony rahateo.